Degmada Galxamur Iyo Shirar Balaadhan Oo Kadhacay - Cakaara News
Degmada Galxamur Iyo Shirar Balaadhan Oo Kadhacay
Galxamur(cakaaranews)Isniin 26ka, September 2016. Waxaa wali si habsamileh u sii socota miyi iyo magaalaba dhamaan 11 Gobol iyo 6da Maamul magaalo Wacyigalinta iyo abaabulka waxbarashada ee kuaadan in ladiwaangaliyo islamarkaana lageeyo dugsiyada caruurta dad’oodu gaadhay waxbarashada iyadoo degmada cusub ee Galxamur ee Gobolka Goolo shirar kaladuwan oo dhinaca abaabulka ah laga qabtay.
Hadaba kooxda iskudhafka ah ee kasocotay xafiiska waxbarashada DDSI oo uu hogaaminayo khabiir Katirsan Xafiiska Waxbarashada mudane Maxamed Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in ay abaabul balaadhan kasameeyeen degmada cusub ee galxamur maadaama ay degma cusub tahay. Wuxuuna intaa kudaray in ay abaabul kasoo sameeyeen degmooyinka kala ah wardheer, galaadi, bookh, galxamur iyo danod oo ay bari bilaabi doonaan.
Khabiirka oo hadalkiisii sii wata ayaa carabka ku dhuftay in abaabulka iyo wacyigalinta ay bulshada u sameeyeen ay faaiido balaadhan u yeelandoonto islamarkaana ay waalidiinta kunool miyi iyo magaalaba ay u riyaaqeen maadaama dugsi waxbarasho deegaanka uu meelkasta ka dhisanyahay macalimiintuna diyaar kutahay.
Sidookale, Mareeyaha wakaalada dekhliga degmada Galxamur mudane daahir Cabdi Cali ayaa dhankiisa kahadlay isagoo tilmaamay in kooxda iyo maamulka jooga degmada galxamur oo iskuuduuban ay abaabul balaadhan kasameeyeen degmada iyagoo shirar kaladuwan u qabatay bulshada qaybaheed kaladuwan.
Isku soowada duuboo kooxdan abaabulka waxbarashada kawada gobolka Doolo ayaa usii anbabaxaysa degmooyinka donod, daratoole iyo degmada cusub ee lehelyucub.